Madaxweynyaasha dalalka Turkiga iyo Soomaaliya oo Heshiis buuxa wada gaaray (Daawo Sawirada).
Madaxweynyaasha dalalka Turkiga iyo Soomaaliya oo Heshiis buuxa wada gaaray (Daawo Sawirada)
Xasan Shiikh Maxamuud Madaxweynaha Soomaaliya iyo dhigiisa dalka Turkiga ayaa qalinka ka duugay heshiis iskaashi oo labada dhinac dhexmaray ka dib wadahadalo saacado badan ku dhexmaray magaalada Ankara oo ah caasimada dowlada Turkiga.
Kulanka labada Madaxweyne ayaa ku saabsan heshiisyo ku saabsan iskaashiga iyo horumarinta hay’adaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya ayaa waxaa qodobadiisa ka mid ah iskaashi la xiriira dhinaca difaaca iyadoo heshiiskaasina uu Soomaaliya fursad u siinayo dib u dhiska iyo horumarinta arrimaha dib u dhiska Ciidamada.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo hadal ka jeediyey saxiixidda heshiisyadaasi uga mahad celiyey Dowladda iyo Shacabka Turkiga taageerada xoogan ee ay la garab istaageen dowlada iyo shacabka laga soo bilaabo saameyntii Abaaraha dalka ka dhacay sanadkii hore. Cabdalla Guul Madaxweynaha Turkigaayaa isna sheegay in dowladda iyo shacabka Turkiga ay ka go’antahay iney si dhab ah u taageeraan shacabka iyo dowlada Soomaaliyeed ilaa inta uu dalkooda cagahiisa isku taagayo, isagoo xusay in taageradaas ay noqon doonto tan ugu weyn ee Somalia ay hesho xiliga dib u dhiska.
Dhinaca kale heshiiskaan ayaa ah kii ugu horeeyey ee ay dowlada cusub ee Soomaaliya la gasho dowlad kale ayaa waxaa labada madaxweyne hortooda ku saxiixay wasiirrada difaaca ee Soomaaliya iyo Turkiga, waxaana goobjoog ka ahaa Taliyaha Ciidamda Xoogga Dalka S/Gaas C/qaadir Sheekh Cali Diini, Agaasimaha Guud ee Hay’adda Nabad Sugidda Qaranka Soomaaliyeed Eng. Axmed Macalin Fiqi iyo madax kale oo ka tirsan labada dhinac.